सा'नै उ'मेरमा क'पाल फुलेका कारण लज्जित हु'नुपरेको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपा'य - HPsanchar.com
October 22, 2020 biplov adhikari घरेलु तरिका 0
से’तो कपा’ल अर्थात कपाल फुल्नु, धेरैको निम्ति टाउको दु’खाईको बिषय हो । एउटा निश्चित उमेरपछि कपाल फूल्नु स्वभाविक हो । यद्यपी अहिले कम उमेर वा किशोरवयमै कपाल सेतो हुने समस्या दे’खिन्छ । कपा’ल सेतो भएपछि त्यसलाई कालो बनाउन अनेक विधी अपनाइन्छ । धेरैले मेहेन्दी लगाउँछन् । यसले किशोरहरुको व्यक्तित्व विकासमा असर पर्छ नै, आत्माविश्वास पनि कमजोर हुन्छ । आज हामी तपाईलाई कपा’ल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
१) अमलाः कपाल फुल्ने समस्याको उ’पचारका लागि अमला एक उत्तम उपाय हो । नरिवलको तेलमा सुकेको अमलाका केही टुक्रा मिसाएर उमाल्नुस् । र तेल चिसिएपछि त्यसलाई आफ्नो कपाल र टाउको लगाउनुस् । तेलले मालिस गर्नुस्, र कपा’ल धुनुभन्दा पहिला एक घण्टा अथवा रातभरी छोडिदिनुस् । यो प्रक्रियामा हप्तामा एक पटक वा दुईपटकसम्म गर्नुस् । २) कागतीः का’गतीको रस मिसाएर नरिवलको तेलले आफ्नो कपाल र टाउकोमा मालिस गर्नुस् । टाउको तेल लगाएको करिब एक घण्टापछि आफ्नो कपाललाई धुनुस् । नरिवलको तेलले फुलेको कपाल रोक्न मद्दत गर्छ । ३) प्याजको रसः प्याजको रस पनि कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा दिने महत्वपूर्ण बस्तु हो । कपाल झर्न, र तालुखुइले हुनबाट रो’क्न मद्दत गर्छ । प्याज र कागतीको रस मिलाउनुस् । आफ्नो कपाल र टाउकोमा मालिस गर्नुस् । ३ मिनेटपछि धुनुस् । प्याजको रस चिसो हुन्छ त्यसकारण यसको प्रयोग गर्मी मौसममा गर्दा ठिक हुन्छ । ४) भृंगराजः लौकाको तेल अथवा भृंगराज ९ एक प्रकारको जडीबुटीको तेल सेतो कपालको उपचारका अर्को उत्तम उपाय हो ।
५) तिलको तेलः तिलको तेल कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा दिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार हो । हरेक दिन एक चम्चा कालो तिलको बिउलाई कम्पतिमा पनि तीन महिनासम्म सेवन गर्नुस् । आफ्नो कपालमा तिलको तेलले मालिस गर्नुस् । ६) बदामको तेलः बदामको तेल, कागतीको रस र अमलाको रसलाई बराबर मात्रामा मिलाउनुस् । कपाल फुल्ने तथा सेता रौ भएकाहरुको समस्याको उपचार गर्नका लागि यो मिश्रण तेलले आफ्नो कपाललाई मालिस गर्नुस् यसले तपाईको कपाल विस्तारै विस्तारै कालो चमकदार हुनेछ । ७) लौकाको रसः जैतुनको तेल वा तिलको तेल मिसाएर आफ्नो टा’उको र कपालमा मालिस गर्नुस् । चौलाई (एक प्रकारको हरियो सब्जी)को ताजा रसले कपालको प्राकृतिक रंग बनाउने, कपाल झर्न रो’क्ने र कपाल फुल्न रोक्नेमा मद्दत गर्छ ।
क’पालमा ते’ल लगाउँ’दा नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र हु’नसक्छ यस्तो अ’सर ! क’पालका लागि तेल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसरी स्व’स्थ जी’वनका लागि हाम्रो शरिरलाई स्वस्थ खानेकुराको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी बलियो र स्वस्थ क’पालको लागि तेल कुनै स्वस्थ खानेकुराभन्दा कम होइन । त्यसकारण हप्तामा दुई पटक कपालमा तेलको प्रयोग अवश्य पनि गर्नुहोस् । तर तपाईंलाई फाइदा पुर्याउने यही तेलले तपाईंको कपाललाई राम्रो फाइदा पुर्याउँदैन । तेल लगाउने बेला केही कुरा याद राख्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्नुहुन्न भने तेलले त्यो फाइदा पुर्याउँदैन जसको तपाईंलाई आवश्यकता छ । आउनुहोस्, तेल लगाउने बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे जानकारी लिऔं ।
नकोर्नेः तेल लगाउनुभन्दा पहिले के तपाईं पनि कपाल कोर्नु हुन्छ । यस्तो हो भने तेलले तपाईंको कपाललाई फाइदाको साटो नोक्सानी पुर्याउँछ । कपाल नकोरी जब तपाईं तालुमा मसाज गर्नुहुन्छ भने कपाल कमजोर हुन्छ र निक झर्ने गर्दछ । त्यसकारण तेल लगाउनुभन्दा पहिले कपाल राम्रोसँग कोर्नुहोस् । कपालको जरामा मात्र तेल लगाउनुः के तपाईं कपालको जरामा मात्र तेल लगाउनुहुन्छ, यस्तो बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् । कपालको जराका साथै अन्त्यसम्म र पूरा कपालभरी तेल लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको कपाललाई पूर्ण रुपमा नरम बनाउँछ जसले कपाल बलियो बनाउँछ । तेल लगाएर सधैं मालिस गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
साधारण तेलको प्रयोगः के तपाईं सधैं भाँडोबाट तेल खन्याएर सिधै कपालमा लगाउनुहुन्छ। तपाईंको यो बानीले कपाल पूर्ण स्वस्थ हुन पाउँदैन । तेललाई सधैं प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसलाई हल्का मनतातो गर्नुहोस्। मनतातो तेललाई कपालको जरामा राम्रोसँग सोस्छ जसका कारण कपाल निकै स्वस्थ हुने गर्दछ। निकै दह्रोसँग मजाजः तेल लगाएपछि कपाललाई निकै हल्कासँग मसाज गर्नुहोस् । यसो गर्दा कपाल झर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यसका साथै तेल लगाउने बेला औंलाको साटो कपासको सहयोग लिनुहोस् । यसलाई तेलमा डुबाएर जरा र कपालमा लगाउनुहोस् । तेल लगाएपछि कस्सिएको जुरोः तेल लगाएपछि कहिले पनि कस्सिएको जुरो नबनाउनुहोस्। यसले तपाईंको कपालको जरा कमजोर बनाएर कपाल झर्न सहयोग गर्दछ। तेल लगाएर कपाललाई सधैं हल्का तरिकाले बाट्नुहोस् र कम्तीमा पनि ३/४ घण्टा पछि नै नुहाउनुहोस् । सुत्नुभन्दा पहिले तेल लगाएर सुत्दा रातभरी यसले कपाललाई निकै नरम र स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्दछ ।